I-Cheesy Garlic Breadsticks! - Ungadliwa
kuze kube nini ukubhaka amazambane e-idaho
ukuthi uzodlani ngoshizi owosiwe
unkosikazi saver macaroni noshizi iresiphi
iresiphi yama-meatballs e-porcupine kuhhavini
I-Cheesy Garlic Breadsticks!
Ngokushesha futhi okumnandi okumangazayo, uzomangala ukuthi ungashesha kanjani ukushaya isanda kusuka kwizinti zokuqala zesinkwa! Uma ungafuni ukwenza inhlama yakho, lokhu kusebenza kahle ngenhlama yesinkwa efriziwe noma imiqulu nayo!
Siyazithanda lezi zinto endlini yethu njengesidlwana noma sikhonze eceleni kwepasta noma isidlo se-lasagna! Uma ungenawo ushizi obhalwe ngezansi, lokhu kusebenza kahle kakhulu nganoma yiluphi ushizi onalo! Le recipe ingaphindwa kabili kalula.
Izindlela zokupheka ezingaphezulu eziseceleni
5kusukaamashumi amabiliamavoti BuyekezaIresiphi
Izinkwa zesinkwa se-Cheesy Garlic
Isikhathi sokulungiselelaishumi nanhlanu imizuzu Isikhathi Sokuphekaishumi nanhlanu imizuzu Isikhathi sokuphumulaishumi nanhlanu imizuzu Isikhathi EsipheleleIsine imizuzu Izinkonzo12 izinduku zezinkwa UmbhaliUHolly NilssonIsimanga esisheshayo futhi esimnandi ngokumangalisayo! Ngeke ukholwe ukuthi ungenza izinkwa zokuzenzela ezenziwe ngobusuku beviki! Phrinta Phina
▢1 wezipuni imvubelo eyomile esebenzayo
▢1/2 isipuni ushukela
▢1/4 inkomishi amanzi afudumele (110 degrees F)
▢3 izinkomishi ufulawa
▢1 izinkomishi amanzi ashisayo
▢1 wezipuni ushukela
▢1 1/2 wezipuni ibhotela , kuncibilike
▢1 i-clove ugaliki , igayiwe
▢1/8 inkomishi ushizi we-cheddar , eshisiwe
▢1/8 inkomishi ushizi omusha weparmesan , eshisiwe
Khombisa ishidi lokubhaka ngephepha lesikhumba.
Hlanganisa imvubelo, 1/2 ithisipuni ushukela ne-1/4 inkomishi yamanzi afudumele esitsheni esincane. Beka eceleni imizuzu engu-5 kuze kuphume amagwebu.
Endishini enkulu hlanganisa izinkomishi ezimbili ufulawa, amanzi, ushukela nosawoti. Faka ingxube yemvubelo bese uyivuza ngobumnene. Faka ufulawa osele ugovuze uze uhlangane ngokuphelele.
Hlukanisa inhlama ibe izingcezu eziyi-12 ezilinganayo bese uzigoqa ube yizinkwa. Beka ephepheni lesikhumba.
Hlangisa i-ovini iye kuma-degree angama-400 ngenkathi uvumela inhlama ikhuphuke (phakama cishe imizuzu eyi-15)
Esitsheni esincane, hlanganisa ibhotela nogalikhi ocoliwe. Imicrowave imizuzwana engama-20 noma kuze kuncibilike ibhotela.
Shayela ingxube yebhotela phezu kwezinti. Phezulu ngoshizi.
Bhaka amaminithi angu-15-18 noma kuze kube yigolide. Khonza ufudumele.
Amakholori:141,Amakhabhohayidrethi:25g,Amaprotheni:4g,Amafutha:ezimbilig,Amafutha agcwalisiwe:1g,Cholesterol:5mg,I-Sodium:135mg,Potassium:36mg,Ushukela:1g,Uvithamini A:65IU,Uvithamini C:0.1mg,I-calcium:26mg,Insimbi:1.5mg
Igama elingukhiyeIzinkwa zesinkwa se-Cheesy Garlic InkamboIsinkwa, Side Dish KuphekiweWaseMelika© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .
Okuthunyelwe kwangempela 07/2014. Isithombe sibuyekezwe 06/2105
yini engingayenza ngama-brown hash aqandisiwe
Izindlela zokupheka eziningi lapha